Tiiraanyada noloshayda( QISO DHAB AH) Qaybtii 2aad. Qore: Mohamed Musa Sh.Noor | Laashin iyo Hal-abuur
Tiiraanyada noloshayda( QISO DHAB AH) Qaybtii 2aad. Qore: Mohamed Musa Sh.Noor
Xaaladdayda nololeed sidaas ayey ahayd, dadka sida badan igu xeeran ee iga warqabay waxay ahaayeen reer abtiyaashey oo si wanaagsan aan ugu dhex jiray.
Sanadku waa 1988 waa xilligii dadku ay bilaabeen in ay dibadaha u baxaan, abtigey iyo qiyskiisa oo Nairobi u baxayeen ayaa la igu daray sidaana qoyskooda uga mid noqday.
Muddo sanad ah kadib abtigey iyo qoyskiisa safar ay ku aadayeen yurub ayaan qayb ka noqday balse aniga kaligey ayaa dhaxda la iga soo celshay kadib markii in aanan qoyska ka mid ahayn la ii sababeeyay, ha yeeshee abtigey ayaa diiday oo isku qasbay in kaligey aan la i celin oo isagu ila soo laabto.
Nairobi ayaan dib ugu soo laabanay muddo markii aan joogay ayuu zakariye oo aan ilma adeer ahayn ila soo xiriiray. Zakariye ilaa yaraanteeni ayaan is naqiin, isagu wuxuu nasiib u yeeshay in uu ka mid noqdo soomaalida Kanada horey u gashay.
Sheeko iyo shukaansi xiriir ah ayaa inoo bilaabatay dhowr jeer ayuu ballamo badan ii qaaday ahayd in uu i guursanayo iina qaadayo xagaa iyo kanada balse waxba kama suura galin.
Muddo markaan kenya joogay sanadkuna uu sii marayo 1989 ayuu abtigey oo awalba dartey usoo laabtay balse markii dambe qoyskiisa kula biiray Swedan ayaa igu wargalshay in aan iska xaadiriyo xagaa iyo Dara salaam Tanzania si aan halkaas uga soo dhoofo.
Mahad alle ayey u sugnaatay ajar iyo khayr aan la soo koobi karina allaha ka siiyo, abtigey wuu ku guulaystay damiciisa ahaa in uu mar labaad igu celsho yurub sidaana aan kula midoobi qoyska abtigey mar kale, waxaasa dhanka dhaqaalaha qayb wayn ku lahaa aabahay oo aan dhihi lahaa hadduusan isagu ahaan lahayn waxba ma suuraabeen isagana xusuustayda kama ga’o. Balse aan dib idiin xusuusiyo in aan labada dhinac ee waalidiintaydaba aan ka ahaa qofka kaliya ee a wada fiirsanayeen.
Aabahey xaasas kale wuu lahaa balse Alle kuma guulayn in uu wax ka siiyo sidoo kale hooyadey iyana guur kala duwan waa samaysay iyana Alle wax kama siin.
Xiriirka aniga iyo zakariye inaga dhaxeeyay marba marka ka dambaysa caadaas ayuu marayay, wuxuu ii muujin jiray in uu ahaa nin naxariis badan, deeqsi ah, i dhagaysta, i fahma, igu kalsoon, kalsoonina iga keensaday.
Kadib markii aan Swedan imid oo xoogaa aan joogay sharcigiina qaatay ayuu dhacay guurkeena aadka loogu wada farxay maadaama laba wada dhalatay ay na kala dhaleen aabahay iyo aabihiisna ay ahaayeen laba Da’ oo isku xigta isna jecel.
Riya wanaagsan in ay ii rumowday ayaan u haystay noloshaydana dhanka quruxda badan ee aan ku riyoon jiray ayay jihada saartay.
Xaalkaygu xaal farxadeed ayuu ahaa, nolosha macaankeeda dhadhan dhabxanagayga aan ku haysto ayey ahayd oo xilliga aan rabo aan dhdhansan karo.
Iftiinka nolosha marka uu kuu soo muuqdo mugdina aad ku jirto waxa kaliya aad ka fakarayso ayaa noqonaya sida iftiinkaas aad ku heli lahayd, mugdiga noloshayda ku jirtayna wuxuu ahaa in aan kaligey dunidan ku ahaa oo iftiin aan u ahaa waalidkayga balse walaal iyo cid aan waheshado marka laga reebo qoyska abtigey ma jirin, sidaa darteed, zakariye wuxuu ii ahaa iftiin ii soo muuqday oo aan u xiisa qabay in aan mugdiga uga baxo.
In aan qoys yeesho isagana xaas u noqdo farxad ayey ahayd aan ku sugan karo inta aan ka gaarayo hammigayga kale ee nolosha oo ahaa in aan hooyo noqdo waliba hooyo barbaariso ubad ay kuwada faraxsan yihiin iyada iyo saygeeda.
Maalmihii farxadda, raaxada iyo rayn raynta ayaan kuwada jirnay, Swedan ayuu arooskeena ka dhacay aroos waliba aad loo soo agaasimaya laguna wada faraxsanaa aadna loogu soobaxay looguna sacab tumay.
Waxay ahayd subaxnimo aroornimo ah oo aan u wada soconay meel, xaafaddu waa Teneast Stockholm, cimiladu waa mid cadha badan oo qabow ku diiranaya xanfarna wata leh.
Qof walba gacmaha uyuu jeebabka jaakadaha waaween aan wadanay kula jiray, si nabdaysan ayaan uga soo baxnay gurigeena, aniga ayaa meel u socday isaguna wuu i wahelinayay Uur markaa yarna waan lahaa.
Sida sheekada ay noogu socotay baan mar kaliya is qabanay kadib markii uu ka carooday eray aan si kaftan ah u dhahay balse isaga meel xun ka taabtay oo uu la xanuunsaday.
Aniga kaftan ayey iga ahayd, ma ahayn wax aan isaga ula jeeday oo is lahaa ku dhaawac, laakin isaga si xun in uu ugu dhaawacmay ayuu muujiyay, la yaabkayguna wuxuu ahaa markii uu kari waayay in uu ila gaaro halkii aan u soconay oo gadaal uu iiga laabtay isaga oo ka cudur daaranaya in uusan ila sii socon karin.
Waa subaxaas subaxa ay bilaabatay musiibada dhibaatada salfan doonta qoyskayga, eray aan afkayga ka dhahay oo aanan ula dan lahayn in aan isaga ku dhaawaco ayaana sababasaday.
La soco qaybta 3aad axadda kale